विवादपछि हट स्टारबाट हटाईयो ‘कफि विद करण’
भारतको चर्चित च्याट शो कफि विद करणमा सहभागी क्रिकेटर हार्दिक पंड्या र केएल राहुलको एपिशोट ओटीटीबाट हटाईएको छ । यो एपिशोड ओटीटी प्ल्याटफर्म हट स्टारमा राखिएको थियो । यसलाई बिसीसीआई अर्थात बोर्ड अफ कन्ट्रोल फर क्रिकेट ईन ईण्डियाद्धारा क्रिकेटर्सलाई पठाईएको सूचना पछि हटाईएइको हो ।
हार्दिक पंड्याले कार्यक्रममा आफ्नो धेरै महिलाहरुसँग सम्बन्ध भएको खुलासा गरेका थिए । उनले आफू आफ्ना आमा बुवासँग निकै नै निकट भएको बताउँदै आफूले आफ्नो भर्जिनिटि गुमाएको कुरा समेत भनिसकेको खुलाएका थिए ।
यसका अलावा उनले कुनै पनि ठाउँमा केटीहरुसँग भेट हुँदा आफूले उनीहरुको नाम नसोधी उनीहरुलाई हेर्न मन पराउने बताएका थिए । उनले क्लबमा केटीहरुको नाम सोध्न भन्दा पनि आफूलाई उनीहरु कसरी हिड्छन् ? केके क्रियाकलाप गर्छन् ? जस्ता व्यवहारहरु हेर्न मन लाग्ने बताएका थिए । उनको यो बयान पछि सामाजिक सञ्जालमा उनको विरोध शुरु भएको थियो ।
उनको यो बयान महिलाको अहितमा भएको भन्दै विरोध भएको थियो । बिसीसीआईले हार्दिकले कार्यक्रममा भनेको कुराहरु निकै नै लाज लाग्दा र मुर्खतापूर्ण भएको बताएको थियो । साथै उनलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्नको लागि २४ घण्टा दिईएको थियो ।
यसमा पड्याले आफूलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भएको बताउँदै आगामी दिनहरुमा यस्ता गल्ती नगर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा उनीसँगै उनकै टिमका लोकेश राहुल पनि थिए । राहुल र पंड्या अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डको विरुद्ध एक दिने टी २० सीरिजको लागि भारतीय टिममा सहभागी भएका छन् ।